MPT Myanmar | Moving Myanmar Forwardfaqs general mm - MPT Myanmar | Moving Myanmar Forward
1: ဆင်းမ်ကတ်မှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုတာ ဘာလဲ။
ဆင်းမ်ကတ်မှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုသည်မှာ တယ်လီကွန်းအော်ပရေတာများထံမှ ဆင်းမ်ကတ် ဝယ်ယူသည့်အခါ ဆောင်ရွက်ရသည့် ဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
2. ဆင်းမ်ကတ်မှတ်ပုံတင်ခြင်းကို ဘယ်အချိန်မှာ လုပ်ဖို့လိုပါသလဲ။
ဆင်းမ်ကတ်မှတ်ပုံတင်ခြင်းမှာ ဆက်သွယ်ရေးညွန်ကြားမှုဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားချက်ကို MPT မှ လိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ပြီး အသုံးပြုသူများအနေဖြင့် ဆင်းမ်ကတ်ဝယ်ယူပြီးနောက် မိမိနာမည်ဖြင့် မှတ်ပုံတင်မထားပါက မှတ်ပုံတင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။
3.ဖုန်းနံပါတ်တွေကို ဘာကြောင့်မှတ်ပုံတင်ဖို့ လိုအပ်တာလဲ။
နိုင်ငံတော်အစိုးရ၏ သတ်မှတ်ချက်အရ ဆင်းမ်ကတ်များအားလုံးကို မှတ်ပုံတင်ထားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
4. နိုင်ငံတော်အစိုးရ၏ သတ်မှတ်ချက်အရ ဆင်းမ်ကတ်များအားလုံးကို မှတ်ပုံတင်ထားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
ဆင်းမ်ကတ်မှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး PTD ရဲ့ ညွှန်ကြားချက်အရ ဆင်းမ်ကတ်များကို မှတ်ပုံတင်ရာတွင် သုံးစွဲသူ၏ အမည်၊ မြန်မာနိုင်ငံသားဥပဒေအရ ထုတ်ပေးထားသည့် သက်သေခံလက်မှတ် (နိုင်ငံသား/ဧည့်နိုင်ငံသား/နိုင်ငံသားပြု/နိုင်ငံသားစိစစ်ခံရမည့်သူ၏ သက်သေခံကတ်ပြား) နှင့် ၄င်းကတ်ပြားတို့၏ မိတ္တူ တို့လိုအပ်မည်ဖြစ်ပါသည်။
5. ဆင်းမ်ကတ်မှတ်ပုံတင်သူတွေရဲ့ သတင်းအချက်အလက်များဟာ လုံခြုံမှုရှိပါသလား။
ဟုတ်ကဲ့။ ဆင်းမ်ကတ်မှတ်ပုံတင်စေလိုသည့် ရည်ရွယ်ချက်မှတစ်ပါး အခြားရည်ရွယ်ချက် မရှိသဖြင့် အော်ပရေတာများမှ ရရှိသောသတင်းအချက်အလက်များအားလုံးမှာ လုံခြုံမှု အပြည့် ရှိပါသည်။
6. စာချုပ်ဖြင့်ဝယ်ယူထားသော MPT ဆင်းမ်ကတ်များကိုလည်းလည်း မှတ်ပုံတင်ရန်လိုအပ်ပါသလား။?
လက်ရှိအသုံးပြုနေသော ဆင်းမ်ကတ်ပိုင်ရှင်နဲ့ စာချုပ်ပါ နာမည်တို့ တူညီမှုမရှိပါက မှတ်ပုံတင်ခြင်းကို ပြန်လည်လုပ်ဆောင်ရန်လိုအပ်မည်ဖြစ်ပါသည်။
7. တစ်ယောက်ထဲမှ ဆင်းမ်ကတ်များစွာကို မှတ်ပုံတင်လို့ ရပါသလား။
: ဆက်သွယ်ရေးညွန်ကြားမှုဦးစီးဌာန ၏ ညွှန်ကြားချက်အရ ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဧပြီလ ၁ ရက်မှစတင်၍ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေး နံပါတ် တစ်ခုလျှင် အော်ပရေတာ တစ်ဦး၏ ဆင်းမ်ကတ် ၂ ခုသာ မှတ်ပုံတင်နိုင် မည် ဖြစ်ပါသည်။
8. ကိုယ့်နာမည် နဲ့ မှတ်ပုံတင်ထား မထား စစ်လို့ရလား။?
ဟုတ်ကဲ့ *601# သို့ခေါ်ဆို၍ စစ်ဆေးနိုင်ပါသည်။ အကယ်၍ အချက်အလက်များမှာ ကိုက်ညီမှုမရှိပါက MPT4U App (သို့မဟုတ်) MPT’s customer selfcare website (care.mpt.com.mm) တို့တွင် အချက်အလက်များကို၀င်ရောက် စစ်ဆေးနိုင်ပါသည်။ ထို့အပြင် သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်အတွင်းရှိ MPT Own Shop များကို သွားရောက်၍ ဆင်းမ်ကတ် မှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက် အကူအညီများ ရယူနိုင်ပါသည် ။
9. ဆင်းမ်ကတ်မှတ်ပုံမတင်ဘူးဆိုရင် ဘာဖြစ်မလဲ။
MPT ၏ ဝန်ဆောင်မှုများကို အသုံးပြု၍ ရနိုင်မည် မဟုတ်ပါ။
10. MPT Own Shop, Branded Shop နဲ့ အရောင်းဆိုင် (POS) ဘယ်လောက်ရှိပါသလဲ။
နိုင်ငံတစ်ဝန်းတွင် MPT Own Shop ၈၉ ဆိုင်၊ MPT Branded Shop ၂၁၈ ဆိုင်နှင့် အရောင်းဆိုင် (POS) ၁ သိန်း နီးပါရှိပါသည်။
11. MPT4U ကို download လုပ်ရန် အသုံးပြုသည့်ဒေတာ ချိတ်ဆက်ခ ပေးရမှာလား။
အခမဲ့ ဖြစ်ပါသည် ။ MPT4U App ကို *4040# ခေါ်ဆိုခြင်းဖြင့် အခမဲ့ ဒေါင်းလုတ်ပြုလုပ်၍ ရယူနိုင်ပါသည် ။ ထို့အပြင် Apple store / Google Play store တို့တွင် ဒေါင်းလုတ်ပြုလုပ်နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။(အင်တာနက်ဒေတာခ ကျသင့်မည်ဖြစ်ပါသည်။)
12. Call Center 106 ကို ခေါ်ဆိုပြီး စစ်ဆေးလို့ရလား ? 106 သည် မှတ်ပုံတင်ထားသော သုံးစွဲသူများ၏အသေးစိတ် အချက်အလက်များကို ထုတ်ဖော်ပြောကြားသွားမည်လား။
သုံးစွဲသူများ အနေဖြင့် call center 106 ကို ခေါ်ဆို၍ ဆင်းမ်ကတ်မှတ်ပုံတင်ထားခြင်း ရှိ၊ မရှိ စစ်ဆေးနိုင်ပါသည်။
13. သုံးစွဲသူများသည် ဆင်းမ်ကတ်မှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက် အချက်အလက်များကို 106 တွင် ပြင်ဆင်လို့ ရပါသလား။
သုံးစွဲသူများ အနေဖြင့် call center 106 ကို ခေါ်ဆို၍ ဆင်းမ်ကတ် မှတ်ပုံတင်ထားခြင်း အချက်အလက်များကို ပြင်ဆင်၍ မရနိုင်ပါ။
14. သုံးစွဲသူများသည် ဆင်းမ်ကတ်မှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက် အချက်အလက်များကို မည်သည့်နေရာတွင် ပြင်ဆင်လို့ရပါသလဲ။
MPT သုံးစွဲသူများသည် မိမိနှင့် နီးစပ်ရာ MPT Own shop များသို့ သွားရောက်၍ ဆင်းမ်ကတ်မှတ်ပုံတင်ခြင်းကို ဆောင်ရွက်နိုင်ပြီး အချက်အလက်များကိုMPT4U အက်ပလီကေးရှင်း နှင့် MPT’s customer self-care website (care.mpt.com.mm) တို့တွင် ပြင်ဆင်နိုင်ပါသည်။
15. ဆင်းမ်ကတ်မှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက် USSD က ဘာလဲ။
MPT သုံးစွဲသူများအတွက် ၎င်းတို့၏ဆင်းမ်ကတ် မှတ်ပုံတင်ထားခြင်းရှိမရှိ လျှင်မြန်စွာ စစ်ဆေးကြည့်ရှုနိုင်ရန် ဆောင်ရွက်ထားခြင်း ဖြစ်သည်။
16. USSD လုပ်ဆောင်ချက်က ဘယ်လိုလဲ။
သုံးစွဲသူများအနေဖြင့် * 601 # သို့ခေါ်ဆို၍ ဆင်းမ်ကတ်မှတ်ပုံတင်ခြင်း ရှိမရှိကို စစ်ဆေးနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး ပထမဦးစွာ မှတ်ပုံတင်ထားသည့်အချက်အလက်တောင်းဆိုမှုအောင်မြင်ကြောင်း အတည်ပြု စာတို(SMS) ကိုလက်ခံရရှိမည်ဖြစ်ပြီး နောက်ချက်ခြင်း နောက်ထပ်စာတို(SMS) ကိုလက်ခံရရှမည်ဖြစ်သည်။ စာတိုတွင် မိမိကိုင်ဆောင်ထားသော ဖုန်းနံပါတ်ကို မိမိ NRC နံပါတ်ဖြင့်တိုက်၍ စစ်ဆေးနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး အကယ်၍အချက်အလက်များမှာ ကိုက်ညီမှုမရှိပါက SMS တွင်ပါရှိသော လင့်ခ်မှတစ်ဆင့်၀င်ရောက်၍ အချက်အလက်များကို ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
17. ဆင်းမ်ကတ်မှတ်ပုံတင်ခြင်း အောင်မြင်မှုရှိမရှိ ဘယ်လိုစစ်ဆေးနိုင်ပါသလဲ။
*601# ကိုခေါ်ဆိုပြီးနောက် သုံးစွဲသူ၏ဖုန်းမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် ဆင်းမ်ကတ်မှတ်ပုံတင်ထားခြင်း ရှိမရှိ စာတန်းပေါ်လာမည်ဖြစ်ပါသည်။ မိမိနာမည်ဖြင့် ဆင်းမ်ကတ်မှတ်ပုံတင်ထားခြင်း မရှိပါက မိမိ၏ အချက်အလက်များဖြင့် မှန်ကန်စွာ မှတ်ပုံတင်ရန် လိုအပ်ပါမည်။ ထို့နောက် MPT 4U App သို့မဟုတ် Self-Care webpage https://care.mpt.com.mm/ နှင့် MPT Own shop များတွင် စစ်ဆေးနိုင်ပါသည်။
18. သုံးစွဲသူများအတွက် ဝန်ဆောင်ခပေးရမှာလား။
CDMA သုံးစွဲသူများမှ လွဲ၍ MPT သုံးစွဲသူများအားလုံး *601# ကို အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
20. ဧပြီလ ၃၀ ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပြီး ဆင်းမ်ကတ်မှတ်ပုံမတင်ရင် ဘာဖြစ်မလဲ၊၊
ဧပြီလ ၃၀ ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပြီး ဆင်းမ်ကဒ်မှတ်ပုံတင်ထားခြင်းမရှိပါက ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ မေလ ၁ ရက် မှစပြီး ဆင်းမ်ကတ် (၂) ကတ်ထပ်ပို၍ မှတ်ပုံတင်ထားသော ဆင်းမ်ကတ်များ နှင့် အချက်အလက်မှန်ကန်စွာ မှတ်ပုံတင်ထားခြင်းမရှိသည့် ဆင်းမ်ကတ်များသည် အထွက်ဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်း၊ SMS စာတိုပို့ခြင်း၊ အင်တာနက်အစရှိသော MPT ၏ ဝန်ဆောင်မှုများကို အသုံးပြုနိုင်မည်မဟုတ်ပဲ Call Center ၁၀၆ သို့ ဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်းမှလွဲ၍ One Way Blocked အနေဖြင့် အဝင်ဖုန်းလက်ခံခြင်းကိုသာ ပြုလုပ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ အွန်လိုင်းမှတစ်ဆင့် အချက်အလက်မှန်ကန်စွာဖြင့် မှတ်ပုံတင်ရန်အတွက် အင်တာနက်ဖွင့်ထားရန် လိုအပ်မည်ဖြစ်သည်။
21. အထွက်ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုမပြုလုပ်နိုင်ခြင်း(One Way Block) အခြေအနေတွင် ဆင်းမ်ကတ် မှတ်ပုံတင် လို့ရနိုင်သေးလား၊၊
အထွက်ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုမပြုလုပ်နိုင်ခြင်း(One Way Block) အခြေအနေတွင် ဆင်းမ်ကဒ်များကို အထက်တွင် ဖော်ပြထားသော နည်းလမ်းများကို အသုံးပြု၍ ( USSD *601# ကိုခေါ်ဆို၍လည်းကောင်း (သို့) MPT4U အက်ပလီကေးရှင်း (သို့) MPT’s Customer Self-care website ဖြစ်သော care.mpt.com.mm များကို အသုံးပြု၍) ဆင်းမ်ကတ်များကို အချက်အလက်မှန်ကန်စွာဖြင့် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဇွန်လ (၃၀) ရက်မတိုင်မီ စာရင်းသွင်း မှတ်ပုံတင်မည်ဆိုပါက ပုံမှန်အတိုင်းပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ အကယ်၍ သတ်မှတ်ကာလ အတွင်း (မေလ နှင့် ဇွန်လအတွင်း) အချက်အလက်မှန်ကန်စွာဖြင့် ဆင်းမ်ကတ်မှတ်ပုံ တင်ခြင်းကို မပြုလုပ်ထားသည့် ဆင်းမ်ကတ်များကို အပြီးပိတ်သိမ်းသွားမည်ဖြစ်သည်။ အွန်လိုင်းမှတစ်ဆင့် အချက်အလက် မှန်ကန်စွာဖြင့် မှတ်ပုံတင်ရန်အတွက် အင်တာနက်ဖွင့်ထားရန် လိုအပ်မည်ဖြစ်သည်။
22. အထွက်ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုမပြုလုပ်နိုင်ခြင်း(One Way Blocked) အခြေအနေတွင် ဆင်းမ်ကတ် ကို အချက်အလက်မှန်ကန်စွာဖြင့် မှတ်ပုံမတင်ဘူးဆိုရင် ဘာဆက်ဖြစ်မှာလဲ၊၊
အထွက်ဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်း ပိတ်သိမ်းခံရပြီး (One Way Blocked) အခြေအနေတွင် ဆင်းမ်ကတ်ကို အချက်အလက်မှန်ကန်စွာဖြင့် မှတ်ပုံမတင်ဘူးဆိုလျှင် ဆက်သွယ်ရေးညွန်ကြားမှုဦးစီးဌာနရဲ့ ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်အရ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ဇွန်လကုန်တွင် အပြီးပိတ်သိမ်းသွားမည်ဖြစ်သည်။
23. တကယ်လို့ ကိုယ်တင်ထားတာမဟုတ်ဘဲ ကိုယ့်မှတ်ပုံတင်သုံးထား မထား ဘယ်လိုသိရပါမလဲ၊၊
ဟုတ်ကဲ့… မိမိနိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားမူရင်းကိုယူဆောင်၍ မိမိကိုယ်တိုင် MPT ၏ သက်ဆိုင်ရာ Own Shop/ MPT Office တွေမှာ ဝန်ထမ်းများ၏ အကူအညီရယူနိုင်ပါတယ်၊၊
24. တစ်ခြားသူက ကိုယ့်မှတ်ပုံတင်ကို တနည်းနည်းနဲ့ရယူ မှတ်ပုံတင်ထားပါက မိမိမှ တစ်ခြား Sim အတွက် ထပ်မံမှတ်ပုံတင်ပါက ၂ ခုထက်ပိုနေသော Sim များအတွက် ဘယ်လိုစီမံဆောင်ရွက်ထားပါသလဲ၊၊
ဆက်သွယ်ရေးညွန်ကြားမှုဦးစီးဌာန ၏ ညွှန်ကြားချက်အရ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြား တစ်ခုလျှင် အော်ပရေတာ တစ်ဦး၏ ဆင်းမ်ကတ် ၂ ခုသာ မှတ်ပုံတင်နိုင် မည်ဖြစ်ပါသည်။ ဒါ့အပြင် မိမိနိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားမူရင်းကိုယူဆောင်၍ မိမိကိုယ်တိုင် MPT ၏ သက်ဆိုင်ရာ Own Shop/ MPT Office တွေမှာ ဝန်ထမ်းများ၏ အကူအညီရယူနိုင်ပါတယ်၊၊
၁။ ဆင်းမ်ကတ် Activation အတွက် မည်သည့်အချက်များ ပြုလုပ်ရန် လိုအပ်ပါမလဲ။
ဆင်းမ်ကတ် Activation ပြုလုပ်ရန်အတွက် အနည်းဆုံး ၂၀၀၀၁ ကျပ် ဖုန်းငွေဖြည့်သွင်းရန် လိုအပ်ပါသည်။
၂။ ပထမဆုံးအကြိမ် ငွေဖြည့်သည့်ပမာဏသည် ၂၀၀၀၁ကျပ်အောက် လျော့နည်းနေရင် ဘယ်လိုဖြစ်မှာပါလဲ။
ပထမဆုံးအကြိမ် ၂၀၀၀၁ ကျပ်အောက် ငွေဖြည့်ပါက SIM Activation မပြုလုပ်နိုင်ပါ။ မအောင်မြင်ကြောင်း စာတိုကို လက်ခံရရှိပါမည်။
၁။ MPT SIM Card အသစ်တစ်ခုရဲ့ဈေးနှုန်းကဘယ်လောက်လဲ။
MPT SIM Card အသစ်တစ်ခုလျှင် ၁၅ဝဝကျပ်ဖြင့် MPT အရောင်းဆိုင်များတွင် ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။
၂။ ပထမဆုံးအကြိမ် ဖုန်းငွေဖြည့်ခြင်း - New SIM Activation ဆိုတာ ဘာလဲ။
SIM Activation ပြုလုပ်ရန် အနည်းဆုံး ၂၀,၀၀၁ ကျပ် ပထမဆုံးအကြိမ် ဖုန်းငွေဖြည့်သွင်းရန် လိုအပ်ပါသည်။
၂၁,၀၀၀ ကျပ်နှင့် အထက် ပထမဆုံးအကြိမ် ဖုန်းငွေဖြည့်သွင်းမှု ပြုလုပ်ပါက ငွေဖြည့်လက်ဆောင် ၁,၀၀၀ကျပ် ရရှိမည် ဖြစ်ပါသည်။
First time SIM Activation Fees
Main Balance ဖုန်းဘေလ် [ကျပ်]
Main Balance သက်တမ်း (ရက်)
အပိုလက်ဆောင် သက်တမ်း (ရက်)
၂၀,၀၀၁ – ၂၀,၉၉၉ ၂၀,၀၀၀ ကျပ် ၁ - ၉၉၉ ၃၆၅ ၀ - ဖုန်းငွေဖြည့်အပိုလက်ဆောင်ကို မည်သည့် အော်ပရေတာကိုမဆို ဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်းနှင့် စာတိုပေးပို့ခြင်း၊ အင်တာနက်အသုံးပြုခြင်းတို့အတွက် သုံးသလောက်ပေးနှုန်းထားများအတိုင်း အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
၂၁,၀၀၀ နှင့်အထက် ၂၀,၀၀၀ ကျပ် ၁,၀၀၀ နှင့်အထက် ၃၆၅ ၁၀၀၀ ၆၀
၃။ ပထမဆုံးအကြိမ် ဖုန်းငွေဖြည့်သွင်းခြင်း ငွေဖြည့်လက်ဆောင်ကို ဘယ်သူတွေ ရရှိမှာပါလဲ။
MPT GSM/WCDMA Prepaid အသုံးပြုသူများအားလုံးသည် ၂၁,၀၀၀ ကျပ် နှင့်အထက် ပထမဆုံးအကြိမ် ဖုန်းငွေဖြည့်ခြင်း ပြုလုပ်ပါက ငွေဖြည့်လက်ဆောင် ရရှိပါမည်။
၄။ ပထမဆုံး အကြိမ် ငွေဖြည့်သွင်းခြင်းအတွက် ငွေဖြည့်လက်ဆောင် ရရှိပါမည်လား။
ဟုတ်ပါတယ်။ ၂၁,၀၀၀ ကျပ်နှင့်အထက် ပထမဆုံးအကြိမ် ငွေဖြည့်ပါက ရက် ၆၀ အသုံးပြုနိုင်သည့် ငွေဖြည့်လက်ဆောင် ၁၀၀၀ ကျပ် ကို ရရှိပါမည်။
၅။ ငွေဖြည့်လက်ဆောင်ကို ဘယ်လို အသုံးပြုနိုင်မှာလဲ။
ငွေဖြည့်လက်ဆောင်ကို မည်သည့် အော်ပရေတာကိုမဆို ဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်း၊ စာတိုပေးပို့ခြင်းနှင့် အင်တာနက်အသုံးပြုခြင်းအတွက် သုံးသလောက်ပေး နှုန်းထားများအတိုင်း အသုံးပြုနိုင်ပါမည်။
၆။ SIM Activation အတွက် မည်သည့်အချက်များ ပြုလုပ်ရန် လိုအပ်ပါမလဲ။
SIM Activation ပြုလုပ်ရန်အတွက် အနည်းဆုံး ၂၀,၀၀၁ ကျပ် ဖုန်းငွေဖြည့်သွင်းရန် လိုအပ်ပါသည်။
၇။ ငွေဖြည့်လက်ဆောင်ရဲ့ သက်တမ်းမှာ ဘယ်လောက်ပါလဲ။
ငွေဖြည့်လက်ဆောင်၏ သက်တမ်းမှာ ပထမဆုံးအကြိမ် ဖုန်းငွေဖြည့်သွင်းသည့် ရက်မှစတင်၍ ရက် ၆၀ ဖြစ်ပါသည်။
၈။ ပထမဆုံးအကြိမ် ငွေဖြည့်သည့်ပမာဏသည် ၂၀,၀၀၁ကျပ်အောက် လျော့နည်းနေရင် ဘယ်လိုဖြစ်မှာပါလဲ။
ပထမဆုံးအကြိမ် ၂၀,၀၀၁ ကျပ်အောက် ငွေဖြည့်ပါက SIM Activation မပြုလုပ်နိုင်ပါ။ မအောင်မြင်ကြောင်း စာတို ကို လက်ခံရရှိပါမည်။
“ • နိုင်ငံတော် စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီက ကြေညာခဲ့သော ၂၀၂၁-၂၀၂၂ ပြည်ထောင်စု၏ အခွန်အကောက်ဥပဒေပြင်ဆင်ချက်အရ ၊၂၀၂၂ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ (၆) ရက်နေ့မှစ၍ အင်တာနက်ဒေတာ အသုံးပြုမှုအပေါ်တွင် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် (၁၅%) နှုန်းထားဖြင့်ကောက်ခံသွားမည်ဖြစ်သည်။
• စာတိုပေးပို့မှု နှင့် ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုတို့ အတွက် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်အား ပြောင်းလဲခြင်းမရှိပဲ မှုလအတိုင်း (၅%)ဖြင့် ဆက်လက်ကောက်ခံသွားမည်ဖြစ်သည်”
၁။ “ရှယ်ပြော” အစီအစဉ်ဆိုတာ ဘာပါလဲ။
ရှယ်ပြော” အစီအစဉ်တွင် MPT သုံးစွဲသူအချင်းချင်းဖုန်းခေါ်ဆိုတိုင်း မြန်မာနိုင်ငံတွင် အသက်သာဆုံးဖုန်းခေါ်ဆိုခနှုန်းထား ၁မိနစ်လျှှင် ၁၅ကျပ်သာ ကျသင့်မည်ဖြစ်ပါသည်။
– အခြားအော်ပရေတာနံပါတ်များသို့ဖုန်းခေါ်ဆိုပါက တစ််မိနစ်လျှင် ၂၇ကျပ်
၂။ “ရှယ်ပြော” အစီအစဉ်ကို ဘယ်လိုရယူနိုင်ပါသလဲ။
• *234*3# ကို ရိုက်နှိပ်ခေါ်ဆိုပြီး ရှယ်ပြောအစီအစဉ်ကို အခမဲ့ရယူနိုင်ပါသည်။
၃။ “ရှယ်ပြော” အစီအစဉ်ကို ဘယ်သူတွေရယူနိုင်ပါသလဲ။
• MPT GSM/WCDMA ဖုန်းအသုံးပြုသူများသည် “ရှယ်ပြော” အစီအစဉ်ကို လျှောက်ထား ရယူနိုင်ပါသည်။
၄။ “ရှယ်ပြော” အစီအစဉ်ကို ရယူထားပါက အင်တာနက်ပက်ကေ့ချ်များကို ၀ယ်ယူအသုံးပြုနိုင်မှာပါလား။
• MPT ၏ အင်တာနက်ပက်ကေ့ချ်အားလုံးကို “ရှယ်ပြော” အစီအစဉ်တွင်လည်း ၀ယ်ယူအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
• 1MB လျှင် ၁ကျပ်သာကျသင့်မည့် ပက်ကေ့ချ်များအပါအဝင် အင်တာနက်ပက်ကေ့ချ် မျိုးစုံကို စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။
၅။ အင်တာနက်ကို စျေးသက်သက်သာသာနဲ့ အသုံးပြုနိုင်ဖို့ ဘယ်လိုအစီအစဉ်တွေရှိပါသလဲ။
ဒတောပက်ကေ့ချ်မျိုးစုံကို စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်ဝယ်ယူပြီး စျေးနှုန်းသက်သာစွာဖြင့် အသုံးပြုနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
၆။ “ရှယ်ပြော” အစီအစဉ်ကို ရယူထားပါက Happy Friday Data အပိုဆုများကို ရရှိနိုင်မှာပါလား။
• ဆွေသဟာအစီအစဉ်တွင် ရရှိနေသည့် အပိုဆုများ(ဥပမာ – Happy Friday Data အပိုဆု အစရှိသဖြင့်) နှင့် ရယူအသုံးပြုနိုင်သည့် အပိုဆောင်းဝန်ဆောင်မှုများ (ဥပမာ – Balance Transfer၊ ယူူထား၊ CRBT အစရှိသဖြင့်) တို့ကို “ရှယ်ပြော” အစီအစဉ်တွင် ဆက်လက်ရယူအသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
၇။ လက်ရှိမှာ အင်တာနက်ပက်ကေ့ချ်အသုံးပြုနေပါတယ်။ အသုံးပြုနိုင်တဲ့ဒေတာပမာဏမကုန်ခင် မှာ “ရှယ်ပြော” အစီအစဉ်သို့ပြောင်းလိုက်ရင် ဘယ်လိုဖြစ်မှာပါလဲ။
• ကျန်ရှိနေသော ဒေတာပမာဏကို “ရှယ်ပြော” အစီအစဉ်တွင် ဆက်လက်အသုံးပြုနိုင် မည်ဖြစ်ပါသည်။
၈။ ကျွန်တော်က Post-paid စနစ်အသုံးပြုနေသူဖြစ်ပါတယ်။ “ရှယ်ပြော” အစီအစဉ်ကိုရယူနိုင်မှာ ပါလား။
• ရယူနိုင်ပါတယ်။ *235*3# ကိုရိုက်နှိပ်ခေါ်ဆိုပြီး “ရှယ်ပြော”အစီအစဉ်ကို အခမဲ့ရယူ နိုင်ပါသည်။
၉။ “ရှယ်ပြော”အစီအစဉ်ကိုရယူရာတွင် ကန့်သတ်ချက်တစ်စုံတစ်ရာရှိပါသလား။
• MPT GSM/WCDMA ဖုန်းများသည် “ရှယ်ပြော”အစီအစဉ်ကို လျှောက်ထားရယူ နိုင်ပါသည်။
• ဖုန်းနံပါတ်တစ်ခုသည် တစ်ရက်အတွင်း အစီအစဉ်ပြောင်းလဲရယူမှုအများဆုံး တစ်ကြိမ်သာ ပြုလုပ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
၁၀။ ကျွန်တော်က Base Tariff အစီအစဉ်အသုံးပြုနေသူဖြစ်ပါတယ်။ “ရှယ်ပြော” အစီအစဉ်ကို တိုက်ရိုက်လျှောက်ထားရယူနိုင်မှာပါလား။
•ရယူနိုင်ပါသည်။ *234*3# ကိုရိုက်နှိပ်ခေါ်ဆိုပြီး “ရှယ်ပြော”အစီအစဉ်ကို တိုက်ရိုက် လျှောက်ထားရယူနိုင်ပါသည်။
၁၁။ ကျွန်တော်က Base Tariff အစီအစဉ်အသုံးပြုနေသူဖြစ်ပါတယ်။ Base Tariff အစီအစဉ် အသုံးပြုနေချိန်မှာ အင်တာနက်ပက်ကေ့ချ်တွေကိုဝယ်ယူနိုင်မှာပါလား။
• Base Tariff အစီအစဉ် အသုံးပြုနေချိန်တွင် အင်တာနက်ပက်ကေ့ချ်များကို ၀ယ်ယူ အသုံးပြုနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ ဆွေသဟာအစီအစဉ်(သို့မဟုတ်) ရှယ်ပြောအစီအစဉ် (သို့မဟုတ်) ရွှေစကားအစီအစဉ်ကို ဦးစွာပြောင်းလဲရယူပြီးမှ အင်တာနက်ပက်ကေ့ချ်များကို ၀ယ်ယူအသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
၁၂။ ကျွန်တော်က CDMA ဖုန်းအသုံးပြုနေသူဖြစ်ပါတယ်။ “ရှယ်ပြော” အစီအစဉ်ကို လျှောက်ထား ရယူနိုင်မှာပါလား။
• CDMA ဖုန်းအသုံးပြုသူများသည် “ရှယ်ပြော” အစီအစဉ်ကို လျှောက်ထား ရယူနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
၁၃။ MPT SIM Card အသစ်ကို စတင်အသုံးပြုချိန်မှာ ဘယ်အစီအစဉ်ပါ၀င်နေမှာပါလဲ။
• MPT SIM Card အသစ်များတွင် ဆွေသဟာအစီအစဉ်ပါ၀င်နေမည်ဖြစ်သည်။ “ရှယ်ပြော” အစီအစဉ်ကိုရယူလိုပါက *234*3# ကိုရိုက်နှိပ်ခေါ်ဆိုပြီးလွယ်ကူစွာ လျှောက်ထားနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
၁၄။ ကျွန်တော့်ရဲ့ဖုန်းက “ရှယ်ပြော” အစီအစဉ်ကိုလျှောက်ထားရယူလို့မရပါဘူး။ ဘာဖြစ်လို့ပါလဲ။
• ဖုန်းနံပါတ်တစ်ခုသည် တစ်ရက်အတွင်း အစီအစဉ်ပြောင်းလဲရယူမှုအများဆုံး တစ်ကြိမ်သာ ပြုလုပ်နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။လူကြီးမင်းသည် တစ်ရက်အတွင်း အစီအစဉ်ပြောင်းလဲမှု တစ်ကြိမ်ထက်ပိုသွားပါက လျှောက်ထားမှုအောင်မြင်မည် မဟုတ်ပါ။ နောက်တစ်ရက်တွင် ပြန်လည်လျှောက်ထားရယူပါ။
• လူကြီးမင်း၏ SIM Card သည် အသုံးပြုမှုယာယီပိတ်သိမ်းခံထားရပါက (One-way block/Two-way block) လျှောက်ထားမှုအောင်မြင်မည် မဟုတ်ပါ။ ဖုန်းငွေဖြည့်ပြီး ပြန်လည်လျှှောက်ထားရယူပါ။
• *224# ကိုရိုက်နှိပ်ခေါ်ဆိုပါ။ (သို့မဟုတ်) ၁၃၃၁ သို့ BAL ဟု စာတိုပေးပို့ပါ။
၁၆။ ရှယ်ပြော အစီအစဉ်ကို အသုံးပြုနေပါတယ်။ ဖုန်းနံပါတ်ကို ၅ စက္ကန့်ကြာဖုန်းခေါ်ဆိုတဲ့အခါ ၁၅ စက္ကန့်စာ ဖုန်းခေါ်ဆိုခကျသင့်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့ပါလဲ။
၂၀၁၇ ဒီဇင်ဘာလ ၁၃ ရက်နေ့မှ စတင်ပြီး Base Tariff မှလွဲ ၍ ပြည်တွင်း ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများ အားလုံးကို ၁၅ စက္ကန့်နှုန်းထားဖြင့် ကောက်ခံသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
ဥပမာ – MPT အချင်းချင်းဖုန်းခေါ်ဆိုပါက
– ၀ မှ ၁၅ စက္ကန့် : ၃.၇၅ ကျပ် (excluding tax)
– ၁၆ မှ ၃၀ စက္ကန့် : ရ.၅၀ (excluding tax)
– ၃၁ မှ ၄၅ စက္ကန့် : ၁၁.၂၅ ကျပ် (excluding tax)
– ၄၆ မှ ၆၀ စက္ကန့် : ၁၅ ကျပ် (excluding tax)
၁။ “ရွှေစကား” အစီအစဉ်ဆိုတာ ဘာပါလဲ။
• “ရွှေစကား” အစီအစဉ်တွင် MPT သုံးစွဲသူအချင်းချင်းဖုန်းခေါ်ဆိုတိုင်း အသက်သာဆုံးဖုန်းခေါ်ဆိုခနှုန်းထား ၁မိနစ်လျှင် ၁၀ကျပ်သာ ကျသင့်မည်ဖြစ်ပါသည်။
MPT ဖုန်းများသို့ခေါ်ဆိုခ – ၁မိနစ်လျှင် ၁၀ကျပ်
အခြားအော်ပရေတာနံပါတ်များသို့ဖုန်းခေါ်ဆိုခ – ၁မိနစ်လျှင် ၂၇ကျပ်
အင်တာနက်အသုံးပြုခ – 1MB လျှင် ၈ကျပ်
စာတိုပေးပို့ခ – စာတိုတစ်စောင်လျှင် ၁၅ကျပ်
၂။ “ရွှေစကား” အစီအစဉ်ကို ဘယ်သူတွေရယူနိုင်ပါသလဲ။
• MPT GSM/WCDMA ဖုန်းအသုံးပြုသူများသည် “ရွှေစကား” အစီအစဉ်ကို လျှောက်ထား ရယူနိုင်ပါသည်။
၃။ “ရွှေစကား” အစီအစဉ်ကို ဘယ်လိုရယူနိုင်ပါသလဲ။
• *234*4# ကို ရိုက်နှိပ်ခေါ်ဆိုပြီး “ရွှေစကား” အစီအစဉ်ကို အခမဲ့ရယူနိုင်ပါသည်။
၄။ “ရွှေစကား” အစီအစဉ်ကို ဘယ်လိုပယ်ဖျက်နိုင်ပါသလဲ။
• MPT မှ မတူညီသော ၀န်ဆောင်မှုအစီအစဉ်များကို မိတ်ဆက်ပေးလျက်ရှိပြီး သုံးစွဲသူများသည် ကြိုက်နှစ်သက်ရာ ၀န်ဆောင်မှုအစီအစဉ်ကို အခမဲ့ပြောင်းလဲရယူအသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ဆွေသဟာ အစီအစဉ်သို့ပြောင်းလဲရန် – *234*2# ကိုခေါ်ဆိုပါ။
ရှယ်ပြော အစီအစဉ်သို့ပြောင်းလဲရန် – *234*3# ကိုခေါ်ဆိုပါ။
ရွှေစကား အစီအစဉ်သို့ပြောင်းလဲရန် – *234*4# ကိုခေါ်ဆိုပါ။
၅။ “ရွှေစကား” အစီအစဉ်ကို အသုံးပြုနေပါတယ်။ MPT ဖုန်းနံပါတ်ကို ၅စက္ကန့်ကြာဖုန်းခေါ်ဆိုတဲ့ အခါ ၁၅စက္ကန့်စာ ဖုန်းခေါ်ဆိုခကျသင့်ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့ပါလဲ။
• ၂၀၁၇ ဒီဇင်ဘာလ ၁၃ ရက်နေ့မှ စတင်ပြီး Base Tariff မှလွဲ ၍ ပြည်တွင်း ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများ အားလုံးကို ၁၅ စက္ကန့်နှုန်းထားဖြင့် ကောက်ခံသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
ဥပမာ- MPT အချင်းချင်းဖုန်းခေါ်ဆိုပါက
၀ မှ ၁၅ စက္ကန့် : ၂.၅၀ကျပ် (excluding tax)
၁၆ မှ ၃၀ စက္ကန့် : ၅.၀၀ ကျပ် (excluding tax)
၃၁ မှ ၄၅ စက္ကန့် : ရ.၅၀ ကျပ် (excluding tax)
၄၆ မှ ၆၀ စက္ကန့် : ၁၀.၀၀ ကျပ် (excluding tax)
၆။ “ရွှေစကား” အစီအစဉ်ကို ရယူထားပါက အင်တာနက်ပက်ကေ့ချ်များကို ၀ယ်ယူအသုံးပြုနိုင်မှာပါလား။
• MPT ၏ အင်တာနက်ပက်ကေ့ချ်အားလုံးကို “ရွှေစကား” အစီအစဉ်တွင်လည်း ၀ယ်ယူအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
၇။ လက်ရှိမှာ အင်တာနက်ပက်ကေ့ချ်အသုံးပြုနေပါတယ်။ အသုံးပြုနိုင်တဲ့ဒေတာပမာဏမကုန်ခင် မှာ “ရွှေစကား” အစီအစဉ်သို့ပြောင်းလိုက်ရင် ဘယ်လိုဖြစ်မှာပါလဲ။
• ကျန်ရှိနေသော ဒေတာပမာဏကို “ရွှေစကား” အစီအစဉ်တွင် ဆက်လက်အသုံးပြုနိုင် မည်ဖြစ်ပါသည်။
၈။ ကျွန်တော်က Post-paid စနစ်အသုံးပြုနေသူဖြစ်ပါတယ်။ “ရွှေစကား” အစီအစဉ်ကိုရယူနိုင်မှာ ပါလား။
• ရယူနိုင်ပါတယ်။ *235*4# ကိုရိုက်နှိပ်ခေါ်ဆိုပြီး “ရွှေစကား”အစီအစဉ်ကို အခမဲ့ရယူ နိုင်ပါသည်။
၉။ “ရွှေစကား”အစီအစဉ်ကိုရယူရာတွင် ကန့်သတ်ချက်တစ်စုံတစ်ရာရှိပါသလား။
• MPT GSM/WCDMA ဖုန်းများသည် “ရွှေစကား”အစီအစဉ်ကို လျှောက်ထားရယူ နိုင်ပါသည်။
၁၀။ ကျွန်တော်က CDMA ဖုန်းအသုံးပြုနေသူဖြစ်ပါတယ်။ “ရွှေစကား” အစီအစဉ်ကို လျှောက်ထား ရယူနိုင်မှာပါလား။
• CDMA ဖုန်းအသုံးပြုသူများသည် “ရွှေစကား” အစီအစဉ်ကို လျှောက်ထား ရယူနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
၁၁။ MPT SIM Card အသစ်ကို စတင်အသုံးပြုချိန်မှာ ဘယ်အစီအစဉ်ပါ၀င်နေမှာပါလဲ။
• MPT SIM Card အသစ်များတွင် ဆွေသဟာအစီအစဉ်ပါ၀င်နေမည်ဖြစ်သည်။ “ရွှေစကား” အစီအစဉ်ကိုရယူလိုပါက *234*4# ကိုရိုက်နှိပ်ခေါ်ဆိုပြီးလွယ်ကူစွာ လျှောက်ထားနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
၁၂။ ကျွန်တော့်ရဲ့ဖုန်းက “ရွှေစကား” အစီအစဉ်ကိုလျှောက်ထားရယူလို့မရပါဘူး။ ဘာဖြစ်လို့ပါလဲ။
• ဖုန်းနံပါတ်တစ်ခုသည် တစ်ရက်အတွင်း အစီအစဉ်ပြောင်းလဲရယူမှုအများဆုံး တစ်ကြိမ်သာ ပြုလုပ်နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။လူကြီးမင်းသည် တစ်ရက်အတွင်း အစီအစဉ်ပြောင်းလဲမှု တစ်ကြိမ်ထက်ပိုသွားပါက လျှောက်ထားမှုအောင်မြင်မည် မဟုတ်ပါ။ နောက်တစ်ရက်တွင် ပြန်လည်လျှှောက်ထားရယူပါ။
၁၃။ ကျွန်တော်အသုံးပြုနေတဲ့အစီအစဉ်က်ို ဘယ်လိုစစ်ဆေးကြည့်နိုင်မှာပါလဲ။
၁။ 4G ဆင်းမ်ကတ် ဘာ့ကြောင့်လဲလှယ်ရန်လိုအပ်ပါသလဲ။
MPT ၏ ပိုမိုလျင်မြန်သော LTE+ network ကိုအသုံးပြုနိုင်ရန်ဖြစ်သည်။
၂။ LTE+ network ဆိုတာဘာလဲ။ 4G ဆင်းမ်ကတ်သုံးရင် 2G/3G ကတ်ထက်ပိုမိုကုန်ကျနိုင်လား။
LTE+ network သည် MPT ၏ ပိုမိုမြန်ဆန်သော အရည်အသွေးမြင့် LTE+ ကွန်ရက်ဖြစ်ပြီး Website များအားကြည့်ခြင်း ၊ High Definition ဗီဒီယိုများကြည့်ခြင်း၊
video ဖုန်းခေါ် ခြင်း ၊ အွန်လိုင်းဂိမ်းကစားခြင်း ၊ download ဆွဲခြင်း နှင့် ဓာတ်ပုံတင်ခြင်းများအား ယခင်ကထက်ပိုမိုလျင်မြန်စွာ လိုင်းအပြတ်အတောက်မရှိ၊ ရပ်တန့်သွားခြင်း
မကြုံရဘဲအဆင်ပြေစွာ ဆာင်ရွက်နိုင်ပါလိမ့်မည်။ 3G ကွန်ရက်ထက်ပိုမြန်သော်လည်း ဝန်ဆောင်ခပိုပေးစရာမလိုပါ။
၃။ သင်၏ဆင်းမ်ကတ်သည် 2G/3G လား 4G လားဘယ်လိုသိရှိနိုင်မလဲ။
*106*5#ကိုဖုန်းခေါ်ဆိုပါ။ SMS ဖြင့်သင်၏ဆင်းမ်ကတ်အမျိုးအစားကိုအကြောင်းကြားပေးပါသည်။ 2G/3G ဆင်းမ်ကတ်ဖြစ်ပါက 4G ဆင်းမ်ကတ်ပြောင်းလဲရန်လိုအပ်ပါသည်။
၄။ 4G ဆင်းမ်ကတ်ကိုဘယ်လိုပြောင်းလဲနိုင်ပါသလဲ။
အနီးဆုံးMPT ပစ္စည်းအရောင်းဆိုင်များသို့သွားရောက်ပြီး 4G ဆင်းကတ်ကို မိမိ၏မူလဖုန်းနံပါတ်အတိုင်း အခမဲ့လဲလှယ်နိုင်ပါသည်။
၅။ 4G ဆင်းမ်ကတ်လဲလှယ်နိုင်သည့်MPT ပစ္စည်းအရောင်းဆိုင်များမည်သည့်နေရာတွင်ရှိပါသနည်း။
အနီးဆုံး MPT branded shops များနှင့် ကိုယ်စားလှယ်ဆိုင်များစာရင်းကို ဤ link (https://tinyurl.com/y2x9k7jw) တွင်စစ်ဆေးနိုင်ပါသည်။
၆။ MPT အရောင်းဆိုင်များသို့ 4G ဆင်းမ်ကတ်လဲလှယ်ဖို့သွားလျင် ဘာတွေယူသွားဖို့လိုပါသလဲ။
(၁) သင်၏လဲလှယ်လိုသော 2G/3G ဆင်းမ်ကတ်
(၂) မှတ်ပုံတင် မူရင်းနှင့် မိတ္တူ ယူသွားရန်လိုအပ်ပါသည်
၇။ MPT အရောင်းဆိုင်များသို့ 4G ဆင်းမ်ကတ်လဲလှယ်ဖို့သွားလျင် အချိန်ဘယ်လောက်ကြာနိုင်ပါသလဲ။
4G ဆင်းမ်ကတ်လဲလှယ်ခြင်းအတွက်နေ့ချင်းပြီးဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။ သို့သော် သွား ရောက်လျှောက်ထားသည့်ဆိုင်ပေါ်မူတည်၍ လူဦးရေ အနည်းအများပေါ်မူတည်၍ အချိန်ကြာကောင်းကြာနိုင်ပါသည်။
၈။ 4Gဆင်းမ်ကတ်လဲလှယ်ခြင်းအတွက် အခကြေးငွေပေးရန်လိုအပ်ပါသလား။
မပြောင်းလဲပါ။ မိမိ၏မူလဖုန်းနံပါတ်အတိုင်း 4Gဆင်းမ်ကတ်လဲလှယ်နိုင်ပါသည်။
၁၀။ MPT ၏ LTE network ကို ဘယ်လိုအသုံးပြုနိုင်ပါသလဲ။
MPT ၏ data package များဝယ်ယူပြီး LTE network ကိုအသုံးပြုလိုက်ပါ။ Data package အသေးစိတ်အား ဤ link (https://tinyurl.com/ycvyqg73) တွင်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
၁ ။ Postpaid မှ Prepaid သို့ ပြောင်းလဲခြင်းဆိုတာဘာလဲ။
Postpaid မှ Prepaid သို့ ပြောင်းလဲခြင်းဆိုသည်မှာ ယခုလက်ရှိတွင် Postpaid ဝန်ဆောင်မှုစနစ် (အသုံးပြုပြီးနောက်လတွင် ထွက်ရှိလာသည့် invoice အားငွေပေးချေရသည့်စနစ်) မှ Prepaid ဝန်ဆောင်မှုစနစ် (ဖုန်းဘေလ်ကြိုတင်ဖြည့်ပြီး အသုံးပြုရသည့်စနစ်) သို့ ပြောင်းလဲခြင်း ကို ဆိုလိုပါသည်။
၂ ။ Postpaid to Prepaid ပြောင်းလဲခြင်းကို ဘယ်လိုလုပ်လို့ရမလဲ?
နိုဝင်ဘာလ (၁)ရက်နေ့ မှစတင်ပြီး
(က) ရန်ကုန်မြို့ရှိ Mobile သုံးစွဲသူများသည် ရန်ကုန်မြို့ရှိ (လမ်း ၄၀ ရုံး)နှင့် ဆူးလေ၊ အလုံ နှင့် အင်းစိန် တယ်လီဖုန်းအခွန်ဌာန (TRA) များတွင် လျှောက်လွှာပုံစံ ဖြည့်စွက်ပြီး လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
(ခ) အခြားနယ်များမှ Mobile သုံးစွဲသူများသည် တိုင်းနှင့်ပြည်နယ်အသီးသီးရှိ မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း၊ စီးပွားရေးဌာနများ တွင် လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
(ဂ) ရန်ကုန်မြို့ရှိ PSTN သုံးစွဲသူများသည် ရန်ကုန်မြို့ရှိ (လမ်း ၄၀ ရုံး) သို့ တွင် လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
၃ ။ ရန်ကုန်မြို့ရှိ Postpaid to Prepaid ပြောင်းလဲခြင်းကို လက်ခံဆောင်ရွက်ပေးနေသော ရုံးလိပ်စာများ သိချင်ပါတယ်။
လမ်း(၄၀) ရုံး – အမှတ်(၁၀၃)၊ လမ်း(၄၀)၊ စီးပွားရေးဌာန၊ ကျောက်တံတားမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ ဖုန်းနံပါတ်- ၀၁-၂၅၂၃၂၂၊ ၀၁-၂၅၄၂၅၄ သို့ ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
ဆူးလေရုံး – အမှတ် (၄၆၅/၄၆၉)၊ မဟာဗန္ဓုလလမ်းနှင့် ဗိုလ်ဆွန်ပက်လမ်းထောင့်၊ ပန်းဘဲတန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
အလုံရုံး -အမှတ်(၁၈၉)၊ အောက်ကြည့်မြင်တိုင်လမ်းနှင့်သစ်တောလမ်းထောင့်၊ အလုံမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
အင်းစိန်ရုံး – အမှတ်(၂)၊ လှိုင်မြင့်လမ်း၊ အရှေ့ရွာမ၊ အင်းစိန်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
၄ ။ Postpaid to Prepaid ပြောင်းလဲခြင်းကို ဘယ်အချိန်တွေမှာ လုပ်လို့ရမလဲ?
တနင်္လာနေ့မှ သောကြာနေ့အထိ (အစိုးရရုံးပိတ်ရက်များမှအပ) မနက် (၉:၃၀) နာရီ မှ နေ့လည် (၂:၀၀) နာရီအတွင်း သွားရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါတယ်။
၅ ။ Postpaid to Prepaid ပြောင်းလဲခြင်းအား လျှောက်ထားရန် ဘာစာရွက်စာတမ်းတွေ လိုအပ်မလဲ?
၃- ကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာ၊ မူရင်းပိုင်ရှင်၏ နိုင်ငံသားစီစစ်ရေးကဒ်ပြားမူရင်း (မူရင်းပိုင်ရှင်ကိုယ်စား လျှောက်ထားလာမှုအတွက်)။
၆ ။ Postpaid to Prepaid ပြောင်းလဲခြင်းအား လျှောက်ထားရန် ဘယ်လောက်ပေးဆောင်ရမလဲ?
Postpaid to Prepaid ပြောင်းလဲခြင်းအတွက် ဝန်ဆောင်ခ ပေးဆောင်ရန် မလိုအပ်ပါ။
သုံးစွဲသူမှ Postpaid မှ Prepaid ပြောင်းလဲခြင်း မပြုလုပ်မှီ အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ငွေပေးဆောင်ရမည်။
၁)Postpaid စနစ်အသုံးပြုစဉ်ကာလအတွင်း ထွက်ရှိထားသော လစဉ်ကြေးများ အားလုံး နှင့်
၂) နောက်လတွင် ထွက်ရှိလာမည့် လစဉ်ကြေးငွေတောင်းခံလွှာများအတွက် ကြိုတင်ငွေ
လစဉ် (၁)ရက်နေ့မှ (၆)ရက်နေ့အတွင်း လျှောက်ထားပါက နောက်ဆုံးထွက်ရှိထားသော လစဉ်ငွေတောင်းခံလွှာ၏ သုံးလစာနှင့်ညီမျှသော ကြိုတင်ငွေ
လစဉ် (၇)ရက်နေ့မှ လတစ်လ၏ နောက်ဆုံးရက်နေ့အတွင်း လျှောက်ထားပါက နောက်ဆုံးထွက်ရှိထားသော လစဉ်ကြေး၏ နှစ်လစာနှင့်ညီမျှသော ကြိုတင်ငွေ
၇ ။ Postpaid to Prepaid ကို ပြောင်းလဲရန် အချိန်ဘယ်လောက်ကြာမလဲ။
သုံးစွဲသူမှ လိုအပ်သော စာရွက်စာတမ်းများထောက်ပံ့ခြင်း၊ လျှောက်လွှာအား ပြည့်စုံစွာ ဖြည့်စွက်ပေးခြင်း၊ထွက်ရှိပြီးသော လစဉ်ငွေတောင်းခံလွှာအားလုံး နှင့် သတ်မှတ်ထားသော ကြိုတင်ငွေများ ပေးချေပြီးပါက ရုံးဖွင့်ရက် တစ်ရက်အတွင်း Postpaid to Prepaid ကို ပြောင်းလဲပေးပါမည်။
၈ ။ Postpaid account တွင် ပိုနေသည့်ငွေနှင့် လိုသည့်ငွေများအား ရှိပါက မည်သို့ပြုလုပ်မည်နည်း။
Postpaid မှ Prepaid သို့ ပြောင်းလဲရန် လျှောက်ထားသည့်အချိန်တွင် ပေးသွင်းခဲ့သော ကြိုတင်ငွေထဲမှ နောက်လတွင်ထွက်ရှိလာမည့် ငွေတောင်းခံလွှာကို ခုနှိမ်ပြီးနောက် Postpaid စနစ် အသုံးပြုစဉ်ကာလ တွင် ကြွေးကျန် ကျန်ရှိနေသေးပါက MPT မှ စာတိုပေးပို့ပြီး အဆိုပါ ကြွေးကျန်အား Prepaid account ထဲသို့ ပြောင်းရွှေ့သွားမည် ဖြစ်ပြီး Prepaid လက်ကျန်ငွေထဲမှ ဖြတ်တောက်သွားမည်။Postpaid account တွင် ကြိုတင်ငွေ ကျန်ရှိနေပါက MPT မှ စာတိုပေးပို့ပြီး အဆိုပါ ကြိုတင်ငွေ လက်ကျန်အား Prepaid account ထဲသို့ ပြောင်းရွှေ့ပေး သွားမည် ဖြစ်သည်။
၁ ။ MPT U-Life ယူလိုက်ဖ် ဆိုတာ ဘာလဲ ?
MPT U-Life (ယူလိုက်ဖ်) သည် MPT SIM သုံးစွဲသူများအတွက်သီးသန့်ပြုလုပ်ထားသည့် ဒစ်ဂျစ်တယ်အာမခံ ၀န်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်ပြီး ဇီ၀က- ကျန်းမာရေးအာမခံ နှင့်သက်တော်စောင့်- ကိုယ်အင်္ဂါထိခိုက်မှုအာမခံ ပေါ်လစီ များကို ၀ယ်ယူပြီး ထပ်ဆောင်း MPT အကျိုးခံစားခွင့်များကိုလည်း ရယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
၂ ။ MPT U-Life ဒစ်ဂျစ်တယ်အာမခံ၀န်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လို အကျိုးကျေးဇူး တွေရရှိနိုင်ပါသလဲ?
လက်ရှိ COVID-19 ကပ်ရောဂါကာလတွင် customer များအနေဖြင့် MPT U-Life(ယူလိုက်ဖ်) ၏ဒစ်ဂျစ်တယ်အာမခံ၀န်ဆောင်မှုများအား လူခြင်းထိတွေ့စရာမလိုဘဲ အွန်လိုင်းမှတဆင့် အလွယ်တကူ ၀ယ်ယူနိုင်ခြင်း ၊ ငွေသား အသုံးပြုစရာမလိုပဲ ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေပေးချေမှုများဖြင့် ပေးချေနိုင်ခြင်း တို့အပြင် MPT ၏ ပရိုမိုးရှင်းတစ်ခုချင်းစီတွင် ထပ်ဆောင်း အကျိုးခံစားခွင့်များကိုပါ ရယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
၃ ။ MPT U-Life (ယူလိုက်ဖ်) ဒစ်ဂျစ်တယ်အာမခံ ၀န်ဆောင်မှုအား မည်သူတွေ ဝယ်ယူနိုင်ပါသလဲ?
MPT SIM Card အသုံးပြုနေသူများအားလုံး ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်။
၄ ။ အာမခံ အမျိုးအစား ဘယ်နှမျိုးရှိပါသလဲ?
အာမခံ အမျိုးအစား ၂မျိုးရှိပါတယ်။
၁။ ဇီဝက ကျန်းမာရေးအာမခံ
၂။ သက်တော်စောင့် ကိုယ်အင်္ဂါထိခိုက်မှုအာမခံ များဖြစ်ပါတယ်။
၅ ။ ဒီအာမခံနှစ်ခု ရဲ့ ကွာြခားချက်တွေက ဘာတွေပါလဲ?
ဇီဝက ကျန်းမာရေးအာမခံသည် COVID-19 ကဲ့သို့ရောဂါများ ၊အခြားသော နေမကောင်းဖျားနာမှုများ ၊ မတော်တဆထိခိုက်ခြင်းများနှင့် ဆက်စပ် သောဆေးရုံတက်ကုသမှုများအတွက်အကျုံးဝင်ပြီးသက်တော်စောင့် ကိုယ်အင်္ဂါထိခိုက်မှုအာမခံ သည်မတော်တဆထိခိုက် မှုများအတွက်သာအကျုံးဝင်ပါသည် ဥပမာ: မတော်တဆမှုများနှင့်ဆက်နွယ်သောဆေးရုံတက်ရခြင်းနှင့်အလုပ်မလုပ်နိုင် ခြင်းစသည်တို့ဖြစ်သည်။ အသေးစိတ်သိရှိလိုပါကသက်ဆိုင်ရာအာမခံကုမ္ပဏီ hotlines ဖုန်းများဖြစ်သည့် ဇီဝက ကျန်းမာရေးအာမခံ Hotlines ဖုန်း (09400083003 ၊ 09400083004) နှင့် သက်တော်စောင့် ကိုယ်အင်္ဂါထိခိုက်မှုအာမခံ Hotlines ဖုန်း (09 777 100 555) များသို့ နေ့စဉ် တနင်္လာနေ့ မှ သောကြာနေ့ (နံနက် (၉) နာရီမှ ညနေ (၅) နာရီအတွင်း) ခေါ်ဆိုမေးမြန်းစုံစမ်းနိုင်ပါတယ်။
၆ ။MPT U-Life (ယူလိုက်ဖ်) မှတဆင့် အာမခံ ဝယ်ခြင်းဖြင့် MPT user များအတွက် ဘယ်လိုအကျိုးခံစားခွင့်တွေ ပိုမိုရရှိနိုင်ပါssမလဲ?
MPT U-Life (ယူလိုက်ဖ်) ဒစ်ဂျစ်တယ်အာမခံ ၀န်ဆောင်မှုအား အသုံးပြုခြင်းဖြင့် Customer များအနေဖြင့် သက်ဆိုင်ရာ အာမခံ အကျိုးခံစားခွင့်များအပြင်MPTမှထပ်ဆောင်းပေးသော Promotion များကိုပါ ခံစားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
၇ ။အာမခံတစ်ခုစီအတွက် အခြေခံစျေးနှုန်းမှာ ဘယ်လောက်ပါလဲ?
ဇီဝက ကျန်းမာရေးအာမခံကို (သင်၏အသက်အုပ်စုအလိုက်) ၅,၆၀၀ကျပ်မှစတင်၀ယ်ယူနိုင်ပြီး သက်တော်စောင့် ကိုယ်အင်္ဂါထိခိုက်မှုအာမခံကို ၁,၂၅၀ ကျပ် မှစတင်၀ယ်ယူနိုင်ပါတယ်။
“ပိုမိုကြည့်ရှုရန်” အား နှိပ်ပြီး သက်ဆိုင်ရာ အာမခံ၏ စျေးနှုန် ၊ အာမခံ အကာအကွယ်၊ အာမခံ သက်တမ်းကာလ နှင့် အာမခံ အကျိုးခံစားခွင့် တောင်းခံခြင်း များအကြောင်းအသေးစိတ်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။
၉ ။ လူတစ်ဦး တည်းမှ ဇီဝက နှင့် သက်တော်စောင့် အာမခံ နှစ်ခုလုံးအား၀ယ်ယူနိုင်ပါသလား?
၀ယ်ယူသူ၏ အာမခံ အကာအကွယ်လိုအပ်ချက်ပေါ်မူတည်ပြီးအာမခံ၀န်ဆောင်မှုနှစ်ခုလုံးအား ၀ယ်ယူနိုင်ပါတယ်။
၁၀ ။ အာမခံ၀န်ဆောင်မှု ကိုဘယ်လိုဝယ်ရမလဲ?
MPT Platform စာမျက်နှာ မှတဆင့် ကြိုက်နှစ်သက်ရာ အာမခံအမျိုးအစားအား ရွေးချယ်ပြီး “ဇီဝက အာမခံ လျှောက်ထားရန်” သို့ “သက်တော်စောင့် အာမခံ လျှောက်ထားရန်” ကို Click နှိပ်ကာ ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်။
၁၁ ။ အာမခံကြေးဘယ်လိုပေးသွင်းရမလဲ?
MPT Pay သို့မဟုတ် MPT ဖုန်းလက်ကျန်ငွေနဲ့ အာမခံကြေးပေးနိုင်ပါတယ်။ သို့သော် အာမခံ၀ယ်ယူရန် လုံလောက်သော လက်ကျန်ငွေထားရှိရန်လိုအပ်ကြောင်း သတိပြုစေလိုပါတယ်။
၁၂ ။ အာမခံ အကျိုးခံစားခွင့် မည်သို့ တောင်းခံနိုင်ပါသလဲ?
၀ယ်ယူသူအနေဖြင့် အွန်လိုင်းမှ တဆင့် သက်ဆိုင်ရာ အာမခံ အကျိုးခံစားခွင့် တောင်းခံခြင်း အတွက် လျှောက်ထားနိုင်ပြီး လိုအပ်သောအချက်အလက် နှင့်စည်းမျည်းစည်းကမ်း အသေးစိတ်များအတွက် သက်ဆိုင်ရာအာမခံ ကုမ္ပဏီများ၏ Hotlines ဖုန်းများဖြစ်သည့် ဇီဝက ကျန်းမာရေးအာမခံ Hotlines ဖုန်း (09400083003 ၊ 09400083004) နှင့် သက်တော်စောင့် ကိုယ်အင်္ဂါထိခိုက်မှုအာမခံ Hotlines ဖုန်း (09 777 100 555) များသို့ နေ့စဉ် တနင်္လာနေ့ မှ သောကြာနေ့ ( နံနက် (၉) နာရီမှ ညနေ (၅) နာရီအတွင်း ) ခေါ်ဆိုမေးမြန်းစုံစမ်း နိုင်ပါတယ်။